Uyazi ukuthi UnguSmippy Lapho ... | Martech Zone
Uyazi ukuthi UnguSmippy Lapho…
NgoMgqibelo, Disemba 27, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Uyazi ukuthi uyi-hippy (smippy) yezokuxhumana, lapho:
Wena qala noma usayine isicelo sokumisa izimpendulo ezizenzakalelayo ze-Twitter… Engeke yenze lutho ukumisa izimpendulo ezizenzakalelayo ze-Twitter.
Ucabanga ukuthi ukukhipha ibhulogi yenkampani yakho kuwukwephula imiyalo yokubhuloga.
Ucabanga kanjalo inkampani eyenza umlingiswa kumasayithi wezokuxhumana ukuze kuthengiswe umkhiqizo wawo isu elihlulekile, noma ngabe liholela ekuthengisweni nasekuvezweni okwandisiwe.
Ucabanga kanjalo amabhulogi kufanele angabi nokukhangisa, izixhumanisi ezikhokhelwayo, noma okuthunyelwe okuxhasiwe nokuthi ama-blogger kufanele enze lonke ucwaningo lwawo futhi abhale okuthunyelwe kwabo kwebhulogi ngomusa kusuka ebuhleni benhliziyo yabo.
(Ngaphambi kokuthi uphawule, qiniseka ukuthi ufunda isigaba sokugcina salokhu okuthunyelwe!)
Ngithanda ama-smippie, ungangizwa kabi. Ngingathanda ukuba ngolunye usuku - ngemuva kokuthi sengibeke imali eyanele yokuthenga umhlaba ezintabeni (nge-broadband yesathelayithi) namakhothi ambalwa epatchouli. Kusukela manje kuze kube manje, ngidinga ukukhokha izikweletu.
Izikweletu zami zikhokhwa lapho izinkampani zinokubona kusengaphambili nesibindi sokusebenzisa ama-mediums aholela ku-ROI engcono nokwaneliseka kwamakhasimende kunanoma yisiphi isikhathi esedlule. Ngiyabasiza ukwenza lokho, futhi ngeke ngixolise ngakho.
I-Twitter njenge-Medium Marketing
Guy Kawasaki utshele uRobert Scoble ukuthi i-Twitter ingaba ithuluzi elikhulu le-PR emlandweni. I-Twitter iyashintsha.
Ezingxoxiswaneni zakamuva, umsunguli u-Evan Williams usevele uqaphele ukuthi ujabule kakhulu ngamathuba e-Twitter njengendlela yokuthengisa kunokumane nje abe yinkundla yokuxhumana. I-Twitter nayo ithatha izinyathelo zoku imali engenayo empumelelweni. Thatha lokho ama-smippies!
I-Twitter iyi- imvume-based indlela yokukhangisa. Ngakho-ke, inikeza ifayili le- ithuba elihle lezinkampani ukuzimaketha ukuthi babona kusebenza kanjani. Ngokuzenzakalela izimpendulo eziqondile nge Tweetlater nokuthumela ngokuzenzakalela okuthunyelwe kwami ​​kwebhulogi ku Twitterfeed, Ngikhulise inani lababhalisile kubhulogi lami ngo-5% futhi nginyusa ukufundwa kwansuku zonke (okuqondile okuvela ku-Twitter) ngo-8% ngokwesilinganiso.
If wena khetha ukungilandela, unginikeza ngokwemvelo imvume yokuxhumana nawe. Ungathukutheli uma ngenza njalo. Into yokuqala okufanele yenziwe yinkampani yonke ukwenza lokhu sebenzisa lokho kuxhawulana bese uphendula ngqo ngento enhle. Uma ungayithandi? Yeka ukulandela! Kulula kanjalo.
AmaSmippies kufanele ajabule ngokwengeziwe, hhayi acasuke ngokwengeziwe, ngokukhangisa ngemidiya yezokuxhumana. Ama-popups nokunye ukumaketha okungathandeki kuyashona ekushoneni kwelanga. Ekugcineni, izinkampani ziyajwayela futhi zifuna ukuthola nokuxhumana nabathengi lapho umthengi ekhona - hhayi ngokuhudulela umthengi ukukhahlela nokumemeza kubo.
Isikhangiso Sezinjini Zokucinga siyisibonelo esihle salokhu. Ukubhuloga kwebhizinisi kuba yinto ebalulekile ezinkampanini, ngoba kuyindlela evelele yokugcinwa nokutholwa. Abathengi bakuma-search engine - kulapho izinkampani zidinga ukuba khona!
Lapho Izinkampani Zishaya!
Ngakho-ke usufunde yonke into futhi kufanele ucabange ukuthi ngiyingulube enkulu ye-capitalist eyeluleka izinkampani ukuthi zisebenzise yonke indlela ezingakwazi ngayo ukuphatha, ukuphatha, ukuphatha nokuthengisa, ukuthengisa, ukuthengisa.
Into enhle ngemithombo yezokuxhumana ukuthi ekugcineni ilinganisa inkundla yokudlala. Izinkampani ezizama ukusebenzisa kabi le ndlela ngeke nje zehluleke, zizojabha. Ukukhohlisa nokuhlukumeza i-Twitter, i-Blogging kanye ne-Social Media kuhlangatshezwana nezinhlawulo ezibuhlungu nezisheshayo… uma kungezona zonke izinhlekelele.
Lokho kuhle kuwo wonke umuntu! AmaSmippies afakiwe.
Ukumaketha Kwe-imeyili Okuthuthukile Okuthuthukile
I-Blog Bloke - Ukukusiza ube yi-Blogger Engcono
Dec 27, 2008 ku-9: 02 AM
Hmm .. Ngikhumbula hhayi kudala kakhulu lapho uKawasaki ayengumblogi we-newbie futhi waphakamisa ukuthi kulungile ukwenza ugaxekile. Kulungile-ke bekumele ngimshaye kancane futhi noDave Winer wavumelana nami kulokho. 🙂
Noma kunjalo, Merry Christmas Dougy. Yiba nenhle futhi konke okuhle kakhulu emndenini wakho!
Dec 27, 2008 ngo-12: 57 PM
Sawubona Bloke! Ukhisimusi omuhle nawe.
Ugaxekile akukhona ukumaketha okususelwa kwimvume, noma!
Dec 27, 2008 ngo-3: 15 PM
Thanda lokhu okuthunyelwe! Ngempela ingenze i-LOL.
Ngenkathi ngiqala ukuphendula, kwangenza ngacabanga kakhudlwana, ngakho-ke ngagcina ngokuthumela impendulo kubhulogi lami: http://www.afhill.com/blog. Kukhona ama-smippie laphaya, futhi cishe kuzohlala kunjalo. Kepha abaningi bethu badinga ukufisa ukuba ngama-smullets - labo ababona zombili izinhlangothi zokuxhumana: ezomuntu siqu kanye nezobuchwepheshe.
Dec 28, 2008 ngo-4: 17 PM
Ngempela kulandelwe u-Andrea lapha evela kokuthunyelwe kwakhe mayelana nokuthunyelwe kwakho (futhi ngicabanga ukuthi nami ngizobe ngikusho lokho).
Nakanjani ngibala (kanye neNethiwekhi yethu) ngaphandle kwesixuku seSmippy. Kodwa-ke, njengoba okuthunyelwe kwakho kukhombisa, ukubhloga ngokukhaliphile futhi njengomuntu wangempela kukubeka kuzo zombili izigaba zeSmippy kanye ne "Smullets" (ukuncoma kuka-Andrea) 🙂
Ukubhuloga nakanjani “kuyazenzakalela” uma nje usudlulile kokufakwayo (ngesandla) kwalokho oyidlulisayo. Ngicabanga ukuthi amabhulogi angihlanyisa kancane yiwo lapho izandla zomuntu zihlangabezane nawo kuphela njengoba bekusethwa.
Ungawubona umehluko 🙂
Ngokumangazayo, i-Twitter ibonakala iyisihloko esizwakalayo kimi namuhla - kokubili kuma-imeyili nokuthunyelwe. Sike sayimboza ngaphambili, futhi, futhi siyisebenzisa, kepha kufana nokufunda igama elisha… kuhlale kunesizathu sokuthi izinto zivele futhi (ngakho-ke ukuvuselelwa kwe-Twitter kuhlelekile, noma ngabe umhlaba ubonakala ungitshela).
O, futhi btw, ukubuyela emuva ezintabeni ngokuxhuma kwesathelayithi kuzwakala kukuhle nakimi!
Dec 29, 2008 ku-1: 08 AM
Smippy, Smulets… Lokhu kungenza ngihleke! Wenza iphuzu elihle kakhulu mayelana nokuthi ama-smippies azohlanjalazwa kanjani yikho kuphela engikuzwayo… .. susa konke ngaphandle kwengqikimba. Uma ufuna ithrafikhi evela kubaphakathi, kungcono ube nezinsimbi ezithile namakhwela ukuze babuke ngisho ne-blog yakho.
Noma kunjalo, ngisehlathini likaphayini, ngiyayithanda, kepha nginezikweletu okufanele ngikhokhe, futhi. 🙁
Dec 29, 2008 ngo-4: 41 PM
Okuthunyelwe okuhle uDoug, ISIPHAKATHI! Ngiyayithanda.
Ubuchwepheshe benzelwe ukukusebenzela. Qhubeka usebenze!
Feb 4, 2009 ngo-9: 29 AM
Ngiyathanda ukuhlangabezana nokuthunyelwe okususa izingxoxo engikukhumbule. Doug, ngiyakwazisa ukungafihli okunikeza kozibonele mathupha. Ingeza izingqimba ekwethembekeni kwakho futhi inikeze abantu (njengami) ama-anecdotes abonakalayo futhi afanele.
Manje kufanele ngiphuthume ngisebenzise uSmippy emshweni ukuze ngizibophezele kulokho engikhuluma ngakho isikhathi eside. 🙂